မတျ 14, 2019 – Healthy Life Journal
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့ပါသတဲ့။ သူအလည်သွားတဲ့ တိုင်းပြည်က ဘုရင်ဟာ သူ့ကို ကြက်တူရွေးတစ်စုံ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကြက်တူရွေးလေးတွေက သူ့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အလှဆုံးသော ငှက်လေးတွေဖြစ်ပါသတဲ့။ သူ့တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတော့ ငှက်နည်းပြတစ်ဦးကိုခေါ်ပြီး ကြက်တူရွေးလေးတွေကို...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ ကျွန်မ အသက် ၃၆ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ တားဆေး တခါမှမစားဖူးပါ။ စစ်ဆေးချက်များအရ သားအိမ်ပြွန်နှစ်ဖက်စလုံး ပွင့်ပါတယ်။ မျိုးဥလည်း ထွက်ပါတယ်။ သားအိမ်အနေအထားလည်း မှန်ပါတယ်။ အမျိုးသားလည်း သုက်ပိုးအရေအတွက် ပြည့်မီပါတယ်။ –...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသမီးတွေ ခံစားရတဲ့ ထိပ်တန်းကျန်းမာရေး ဝေဒနာငါးခုမှာ မောပန်းနုံးချည့်တာက တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက မကြာခဏ မောပန်းနုံးချည့်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သိုင်းရွိုက်ပြဿနာများ လည်ပင်းမှာ သိုင်းရွိုက်လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ပြာပုံသဏ္ဌာန်...
လျှပ်တပြက်ဓာတ်ပုံကြောင့် ထိတ်လန့်ကာ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၇၉ ပေါင်မှ ၁၂၃ ပေါင်အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သူ
၊ ကိုထက် ၊ နော်တင်ဟမ်မှ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးမိခင် ဆိုဖီဂျူ့ဒ်ဟာ တစ်ညမှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လျှပ်တပြက် သတိထားလိုက်မိပြီးနောက် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ “အဲဒီညမှာ ချစ်သူကားလ်နဲ့ ချိန်းဆိုတုန်း ၀ိုင်တစ်ဖန်ခွက်က ကျွန်မကိုယ်ပေါ် ဖိတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ...
ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ရန် နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်သည့် နည်း ၁၀
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ခံတွင်းကင်ဆာဟာ အဖြစ်များလာသလို နေ့စဉ် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နှုန်းပိုများစေတဲ့အတွက် ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) ဆေးရွက်ကြီးဝါးစားတာကို ရှောင်ပါ။ (၂) ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ စီးကရက်၊ ဆေးပေါလိပ်အစရှိတဲ့ ဆေးလိပ်တွေကို...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မက်ကူလာအားနည်းခြင်း (Macular Degeneration) အကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. မက်ကူလာအားနည်းခြင်းအကြောင်း မပြောခင် အရင်ဆုံး မက်ကူလာအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ မက်ကူလာက မျက်စိအာရုံခံလွှာရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။...